ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်း - Baoding Lead Fluid Technology Co. , Ltd.
ဆေးပစ္စည်းကိရိယာများ၊ စမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့်အသုံး ၀ င်သောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းသည်မြုံခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းတိကျမှုအတွက်အမြဲတမ်းတင်းကြပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိခဲ့သည်။ ခဲအရည် peristaltic ပန့်များကိုဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
› မြင့်မားသောအရည်ပိုက်လိုင်း၊ သန့်ရှင်းလွယ်ကူအောင်လုပ်ထားနိုင်သည်
› နူးညံ့။ တည်ငြိမ်သောဂီယာ၊ တိကျသောတိုင်းတာမှု
› ၎င်းသည်သံလိုက်ပုတီး၊ ဂျယ်လ်၊ ဂလိုက်စီရင်နှင့်အခြားအညစ်အကြေးများနှင့်အနည်အနှစ်များပါသည့်ပစ္စည်းများလွှဲပြောင်းနိုင်သည်
› ပိုက်လိုင်း၏အတွင်းပိုင်းနံရံသည်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိပြီးအဆုံးမရှိ၊ အဆို့ရှင်နှင့်အနိမ့်ဆုံးအကျန်များရှိသည်
Lead Fluid ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကျောက်ကပ်ဆေးကြောစက်သည်အောက်ပါလိုအပ်ချက်များအတွက်ပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်များပေးနိုင်သည်။
› နမူနာနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်ရန်အလိုအလျှောက် chemiluminescence / POCT နှင့်အခြား IVD ပစ္စည်းကိရိယာများ
› ပရိုတိန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ သွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊
› သွားသန့်ရှင်းရေး၊ liposuction, lithotripsy, အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ perfusion စသည်။
› အမြင့်ဆုံးတိကျသောအဖြေရှာခြင်းဓါတ်ကူပစ္စည်း၊ ထုပ်ပိုးအရည်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
လက်ရှိကပ်ရောဂါအခြေအနေမှာဆိုးရွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများကိုဖြေလျော့။ မရပါ။ ကပ်ရောဂါကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းတို့တွင်ဓာတုပစ္စည်းများ ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်း၊ ပိုးသန့်ဆေးဓာတုပစ္စည်းများစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဓါတ်ကူပစ္စည်းစမ်းသပ်ခြင်းကဲ့သို့သောသယံဇာတထုတ်ကုန်များဖြစ်လာသည်။ စျေးကွက်၏ထောက်ပံ့မှုသေချာစေရန်, အဓိကထုတ်လုပ်သူထုတ်လုပ်မှုထွက်သယ်ဆောင်ရန်အချိန်ဆန့်ကျင်ပြိုင်ကားနေကြသည်။ အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အအေးခံစက်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းများကဲ့သို့အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆေးဝါးသုံးပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထုတ်လုပ်သူများစွာ၏ထုတ်လုပ်မှုဖိအားကိုများစွာလျော့ကျစေသည်။ ခဲအရည်သည်ကပ်ရောဂါကာကွယ်တားဆီးရေးနှင့်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ရန်သူ၏အစိတ်အပိုင်းကိုတိတ်တဆိတ်လုပ်ဆောင်နေသည်။ Lead Fluid ၏ Peristaltic ပန့်များနှင့်ဖြည့်စွက်စနစ် Peristaltic pump များသည်၎င်းတွင်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ role မှပါ ၀ င်သည်။ ခဲအရည်သည်ကပ်ရောဂါအောက်တွင်ဓါတ်ကူပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကာကွယ်ဆေးဖြည့်စွက်ခြင်းတို့ကိုစစ်ဆေးသည်။
♦ Microliter peristaltic pump စုပ်စက် WSP3000
1. မြင့်မားသောဖြည့်တင်းတိကျမှန်ကန်မှုကို， အမှားသည်± 0.2% ထက်နည်းသည်။
expand ချဲ့ထွင်ရန်လွယ်ကူသော ular မော်ဂျူလာဒီဇိုင်း pump အမျိုးမျိုးသောပန့်များကိုအဆက်မပြတ်ဖြည့်တင်းသည့်စနစ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းရန်ကက်စကိတ်နိုင်သည်။
၃။ မြင့်မားသောတိကျသော servo motor drive၊ ကြီးမားသော torque၊ အခမဲ့ထိန်းသိမ်းခြင်း， Rotary pressure tube တည်ဆောက်ပုံ၊
4. စုပ်စက်ပြွန်ဆုံးရှုံးမှုနိမ့်သည်, နာရီ 1000 အထိစဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း, 12 နာရီ attenuation မှုနှုန်း ＜1% ။
၅။ စုတ်ယူခြင်းပြန်လည်လုပ်ဆောင်ချက်၊ သုညရေ၊ ချက်ချင်းပိတ်ခြင်း။
၆။ သန့်ရှင်းသောပိုက်လိုင်းမြင့်သည်၊ အလွယ်တကူဖြုတ်တပ်နိုင်သည်၊ ဆေးကြော။ လွယ်ကူစွာဆေးကြောနိုင်သည်။ CIP နှင့် SIP ကိုထောက်ပံ့သည်။
၇။ ပိုက်လိုင်းကိုပိတ်ဆို့ရန်မလွယ်ကူပါ၊ ၎င်းသည်သံလိုက်ပုတီး၊ ဂလီစီရင်စသည်တို့ကဲ့သို့သောအချို့သောသိသာလွယ်သောပစ္စည်းများနှင့်လွယ်ကူစွာထိတွေ့နိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်အလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
♦ Peristaltic pump ဖြည့်စနစ်
ဖောက်သည်များ၏ဖြည့်စွက်မှုတိကျမှုလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီအတွက်အရည်အအေးပမာဏကိုလွတ်လပ်စွာချိန်ညှိခြင်း (အမှား≤± 0.5%) ။
၃။ အွန်လိုင်းအလိုအလျှောက်လည်ပတ်မှုကိုသိရှိရန်ပုလင်းများမရှိခြင်းအတွက်အဆာစက်၏စတင်အချက်ပြမှုနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းအချက်ပြမှုကိုလက်ခံနိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအဆာစစ်ဆင်ရေးကိုခြေလျင်ခလုတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုကိုနားလည်နိုင်သည်။
၄။ အရည်သည်ရေပိုက်နှင့်သာထိတွေ့သည်၊ စုပ်စက်၏ကိုယ်ထည်မဟုတ်ပါ၊ အဆို့ရှင်ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိပါ၊
၅။ ပွန်းစားသောအရည်များ၊ အမြှုပ်များပါ ၀ င်သောအရည်၊ အမှူများ၊ ရေမြှုပ်များ၊ ဓာတ်ငွေ့အမြောက်အများပါဝင်သောအရည်များ၊ ဆိုင်းငံ့အမှုန်များပါဝင်သည့်အရည်များအတွက်သင့်တော်သည်။
01 ဖြည့်ပမာဏနှင့်မြုံ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်; မြင့်မားသောအဆာတိနှင့်မြင့်မားသောထိရောက်မှု။
03 ပွန်းစားသောအရာများသို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့အမှုန်များပါ ၀ င်သောချေးများဖြင့်ပြည့်နိုင်သည်။
04 အရည်တစ်ဇီဝလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဖြည့်သောအခါ, ဇီဝလှုပ်ရှားမှုမပျက်စီးနိုင်ပါ။
အထက်ပါအကြံပြုထားသော Lead Fluid peristaltic pump pump ထုတ်ကုန်များ၏စီးဆင်းနှုန်းနှုန်းသည်ကျယ်။ ချိန်ညှိနိုင်သည်၊ အရည်မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ နိမ့်ကျသောညှပ်မှုဖြင့်၎င်းကိုဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတက်ကြွသောအရည်များကိုမလှုပ်ရှားစေဘဲသယ်ယူရန်နှင့်ဖြည့်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အပြည့်ဖြည့်နေသောအရည်သည်ရေပိုက်နှင့်သာထိတွေ့ပြီးကူးလူးကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ချေးသည့်ခံနိုင်သည့်ရေပိုက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသော corrosive အရည်များကိုဖြည့်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး wear -proof hose ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အစိုင်အခဲအမှုန်များပါ ၀ င်သောအရည်များကိုဖြည့်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအရည်၏ဂုဏ်သတ္တိများ, ကွဲပြားခြားနားသောအဆာအသံအတိုးအကျယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်လုပ်တဲ့လိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူတစ်ခုတည်း peristaltic စုပ်စက်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် peristaltic စုပ်စက်အဆာစနစ်များကိုပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်ပေး OEM စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်; peristaltic pump သည်အရည်များဖြည့်သည့်အခါအဆို့ရှင်များနှင့်တံဆိပ်ခတ်မှုများမလိုအပ်ပါ။ ခြောက်သွေ့သောလည်ပတ်မှု၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှု၊
Lead Fluid သည် peristaltic ပန့်များ၏ဒီဇိုင်း၊ တည်ဆောက်ပုံ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုအဓိကထားသည်။ သုံးစွဲသူများအားအရည်အသွေးမြင့်ပါမစ်စုပ်စက်ထုတ်ကုန်များနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းပညာဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ရန်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။ Peristaltic စုပ်စက်ထုတ်ကုန်လိုင်းများတွင်အပြည့်စုံဆုံးစီးရီးအပြင်၊ ၀ ယ်ယူသူ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ Lead Fluid သည် OEM စိတ်ကြိုက် peristaltic စုပ်စက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးနိုင်သည်။ Lead Fluid ၏ပြီးပြည့်စုံသောရင့်ကျက်သောထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွေ့အကြုံသည်သင့်အားလျင်မြန်စွာလျှောက်လွှာလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုမြန်ဆန်စွာပေးနိုင်ပြီးအရည်အသွေးမြင့်မားသော၊ တိကျမှန်ကန်သောနှင့်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် peristaltic pump pump ပေးပို့သည့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးနိုင်သည်။
အမှတ် ၉၉၉ Fuxing လမ်း၊ Baoding တရုတ်